पहिलो भाइटीका रेखा थापासँग - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
पहिलो भाइटीका रेखा थापासँग
कृष्ण आचार्य काठमाडौं कार्तिक २३
निर्देशक हिमग्याप लामालाई भाइटीका लगाइदिँदै नायिका रेखा थापा (फाइल फोटो)
‘करिब १० मिनेट म खै कता हराएँ कता। टीका लगाइसकेपछि केही बिग्रियो कि, मिलेन कि भन्ने लाग्यो। टिभी, फिल्ममा देखेकोभन्दा निकै फरक हुँदोरहेछ रियलमा भाइटीका लगाउँदा।’
निर्देशक हिमग्याप लामाले मान्ने धर्म, संस्कृतिमा तिहारको त्यति महत्व थिएन। त्यसैले त जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दासम्म उनलाई कहिल्यै आफ्नी एक्ली बहिनीसँग भाइटीका लगाऊँ–लगाऊँ लागेन। उनको गाउँ, समाज र परिवेशमा न उनका बाउ, बाजेले नै कसैसँग भाइटीका लगाए। दशैंं, तिहारले उनलाई कहिल्यै छोएन। जनजाती समुदायबाट भएकाले पनि होला सानैदेखि यी चाडको अनुभव नै लिएनन् उनले।
अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ। हिजो मन नपर्ने तिहार आज उनका लागि ‘बेस्ट फेस्टिवल’ बनेको छ।
‘सानोमा बाटोमा हिँड्ने मानिसले टीका, माला लगाएको देख्दा के होला भन्ने लाग्थ्यो। उमेर बढ्दै जाँदा यसबारे केही जान्ने–बुझ्ने अवसर पाएँ। बुद्ध धर्म र हिन्दु धर्ममा मनाइने तिहार संस्कृतिबीचको भिन्नता बुझ्न पाएँ’, लामा भन्छन्, ‘आस्था र विचार आ–आफ्नो भए तापनि धर्म, संस्कार, रितिरिवाज र परम्परा सबैको साझा हो भन्ने फिल हुन थाल्यो।’
आजभोलि उनलाई तिहारसँगै बुबा–आमाको मुख हेर्ने दिन, तीज, रक्षाबन्धन सबैमा रुची बढ्दै जान थालेको छ। यी परम्परा हिन्दुले मात्र नभएर सबै नेपालीले पछ्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने भावना जागेको छ। र, त २०७५ सालको तिहारका लागि उनले आफ्नो रसिया भ्रमण नै रद्ध गरे।
कुरा आजभन्दा तीन वर्ष पहिलेको हो। जतिबेला उनलाई जीवनमा पहिलोपटक भाइटीका लगाउने सौभग्य मिल्यो। त्यो पनि नायिका, निर्देशक एवं निर्मात्री रेखा थापासँग। ऐतिहासिक चलचित्र भीमदत्तका निर्देशक लामाले कहिल्यै सोचेका थिएनन्, उनले जीवनमा एकदिन कसैको हातबाट भाइटीका लगाउँछु भन्ने। अझ आफ्नो रगतको नाताभन्दा परको व्यक्तिसँग।
आखिर यो अवस्था कसरी आयो त? हिमग्याप भन्छन्, ‘तिहार आउनुअघि भाइटीकाको प्रशंग उठ्यो। रेखाले दाइ यसपटक टीका लगाउनुपर्छ है भनिन्। कुरा यत्ति हो।’
यत्तिमात्र हो त? प्रश्न खस्न नपाउँदै लामाले थपे, ‘हाम्रो संस्कारमा भाइटीका लगाउने चलन थिएन। मैले हामीले पनि लगाउन मिल्छ र भनेर प्रश्न गरेँ। म बुद्धिस्ट र उनी हिन्दु भएकाले पनि के हो के हो भन्ने लागेको हो। तर, रेखाले हुन्छ भनेपछि म पनि राजी भएँ। उनको आमाले पनि सपोर्ट गर्नुभयो।’
निर्देशक लामा जीवनमै पहिलोपटक भाइटीका लगाउँदै थिए। के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने केही थाहा थिएन। जे त होला भनेर भाइटीकाको साइतअनुसार टीका लगाउन रेखाकोमा पुगे। साइत सुरु भयो। उनी रेखाको अगाडि बसे। उनको अगाडि कलस, टीकाको थाली, माला, तोरीको तेल, चामलमा पाला, फूल, फलफूल, ओखर थियो। अब के हुन्छ? लामाको मनमा हुटहुटी बढ्यो।
रेखा हातमा फूल लिएर लामालाई पुज्न, दूबोमा तेल छुवाएर उनको वरिपरी घुम्न थालिन्। उनलाई रमाइलो लाग्दै गयो। ‘टीका लगाउनुअघि नै कतिधेरै विधि पार गर्नुपर्ने !’
उनी हल्का मुस्कुराउँछन्। रेखाले हातले निधार छुँदा निकै फरक अनुभूति गरे लामाले। ‘जीवनको उत्तरार्धमा निकै फरक अनुभूति गर्न पाएँ। साँच्ची भन्ने हो भने त्यो मेरा लागि जीवनमै आनन्ददायी क्षण थियो।’
त्यसो त टीका लगाउँदा उनी निकै सिरियस थिए। अर्कै दुनियाँमा पुगेजस्तो महसुस गरिरहेका थिए। भन्छन् ‘करिब १० मिनेट म खै कता हराएँ कता। टीका लगाइसकेपछि केही बिग्रियो कि, मिलेन कि भन्ने लाग्यो। टिभी, फिल्ममा देखेकोभन्दा निकै फरक हुँदोरहेछ रियलमा टीका लगाउँदा।’
लामाले रेखासँग टीका लगाएर दाजु–बहिनीको सम्बन्धमात्र स्थापित गरेनन्। दुई धर्मबीच आपसी सहिष्णुता पनि कायम गरे। भन्छन्, ‘धर्म, संस्कृति, परम्परा हामी सबैका साझा हुन्। त्यसैले हामीले त्यसको विरोध गर्नु मूर्खता हो। बरु आफ्नो ईच्छा, रुची छैन भने नमनाउने तर, विरोध पनि नगर्ने नि।’
‘टीका लगाइसकेपछि रेखाले बहिनीको खुट्टा पनि ढोग्नुपर्छ नि दाइ भनिन्, मलाई अलि अड लाग्यो’, लामा त्यो पल सम्झन्छन्, ‘टीकापछि खुट्टा ढोग्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहै थिएन। मजाक गरेकोजस्तो पनि लाग्यो। त्यसैले खुट्टा नछोइकन ढोगेँ।’
रेखाले कहाँ मान्थिन् र। ‘यसरी कहाँ हुन्छ दाइ छुनैपर्छ’ भनेर जिद्धि गर्न थालिन्। त्यहाँ भएका सबै जना हाँसे। रेखाको आमाले पनि खुट्टा त छुनैपर्छ भनिन्। अनि उनले आफ्नो टाउको लगेर रेखाको खुट्टामा छुवाइदिए। र, त्यो क्षण बन्यो जीवनमा उनले कहिल्यै नबिर्सने एउटा पल।
रेखासँग टीका लगाएपछि आफू पनि हिन्दु धर्म, संस्कृति र संस्कारमा बाँधिएको अनुभव भयो उनलाई। ठूलै ज्ञान, बुद्धि, सीप आर्जन गरेजस्तो लाग्यो। ढाकाटोपी, कपडा, विभिन्न मिस्ठान्न भोजन, रोटीका परिकार हातमा थामिँदा दंग परे।
अनि लिनुमात्र भयो केही दिनुभएन? ‘मैले पनि दक्षिणास्वरुप १० हजार रुपैयाँ दिएँ नि’, हल्का मुस्कुराउँदै लामाले भने।
मुखलेमात्र दाजु–बहिनी भन्दा र टीका लगाइसकेपछिको अवस्थामा उनले निकै फरक अनुभव संगालेका छन्। कतै दाजु–बहिनीको प्रशंग आयो कि त्यही क्षण याद आउँछ।
‘अझ गाढा आफनत्तो फिल हुने, ऊ मेरो आफ्नै कोही हो भन्ने भान हुने। उसका राम्रा–नराम्रा सबै कामप्रति चासो जाग्ने। विभिन्न कुरामा सल्लाह–सुझाव दिन मन लाग्ने। रगतको नाता नभए तापनि भावनात्मक सम्बन्ध नै कति मीठो !’ लामा केही भावुक हुन्छन्।
भाइटीकापछिको सम्बन्धलाई उनी अब मृत्युसँग पनि जोड्छन्। ‘रेखाभन्दा पहिले मेरो मृत्यु भयो भने उनलाई स्वर्गको बाटो देखाउने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ’, भन्छन्, ‘मभन्दा अगाडि उनको मृत्यु भयो भने पनि मैले दाइको रुपमा संस्कारअनुसार गर्नुपर्ने सबै कर्म गर्नेछु। त्यसैले दाइ–बहिनी, दिदी–भाइबीचको सम्बन्ध भनेको मृत्युपछि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ। र, यो हुनुपनि पर्छ।’
टीका लगाउनुअघि निर्देशक लामाको रेखासँग व्यवसायिक हिसावलेमात्र दाइ–बहिनीको सम्बन्ध थियो। तर, टीकापछि रेखा उनको मुटुको एक टुक्रा बनेकी छन्। अर्थात, मुटुमा बसेकी छन्। नबिझाउनेगरी। जति उनी रेखासँग नजिक हुँदै गए, रेखालाई उति नै नजिकबाट चिन्ने मौका पनि पाए। आज रेखा उनलाई एक परिपक्क नारी लाग्छ।
तपाईंको नजरमा रेखा थापा को हो?
‘उसले जीवन, संघर्ष र दर्शन राम्रोसँग बुझेकी छ। तथापी, दाइको रुपमा हेर्दा अझै उसले धेरै कुरा बुझ्न छजस्तो लाग्छ’, उनी हौसिँदै भन्छन्, ‘एउटा दाइलाई बहिनी जतिसुकै माथि गए तापनि सानै लाग्दोरहेछ। त्यसैले रेखाले अझै राम्रो गरिदिए हुन्थ्यो, यसो गरिदिए हुन्थ्यो, उसो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ।’
आँटेको काम जसरी भए पनि पूरा गरेरै छाड्ने रेखाको विशेषता उनलाई खास लाग्छ। लामाका अनुसार, ‘मसँग धेरै समय छैन र मैले धेरै काम गर्नुपर्ने छ’ भन्ने भावना छ रेखामा।
‘परिवारमा ऊ एउटा आइडल हो। उसका लागि आमा भगवान हुनुहुन्छ। परिवारमा सबैले माया गर्छन्। नारिप्रति सम्मान छ’, अन्तिम चुस्की लिएर कफीको कप टेवलमा राख्दै लामा भन्छन्, ‘कुनै नारी थिचोमिचोमा परेको देख्न सक्दिनन्, यो कुरा हामी उनका फिल्मबाट पनि अनुभव गर्न सक्छौँ।’
प्रकाशित २३ कार्तिक २०७५, शुक्रबार | 2018-11-09 10:28:13
बरु भात छाड्छु मःमः छाड्न सक्दिनँः बुद्धिसागर (अन्तर्वार्ता)
केन्द्रमा चर्चा कमाउने मोफसलका गायक
जहाँ चेलीहरु घरमा भन्दा जंगलमा सुरक्षित महसुस गर्छन्
बाग्लुङका दुई विद्यालयमा पशु विज्ञान पढाइने
बागलुङको दुई विद्यालयलाई सरकारले पशु विज्ञान अध्यापनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ।
छोराछोरीलाई साङ्लोले बाधेर यातना दिने बाबुआमालाई २५ वर्ष जेल
अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाका एक निर्दयी बाबुआमालाई २५ वर्षको जेल सजाए सुनाइएको छ।
‘हेलो सीएम‘मा गुनासो आउन छाड्यो
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष जेठ महिनामा सञ्चालन गरेको ‘हेलो सीएम‘ कार्यक्रममा पछिल्लो समय जनगुनासो आउन छाडेका छन्।
पोखराको चिप्लेढुंगामा बम भेटियो, डिस्पोजको भिडियो लाइभ गर्ने पत्रकारमाथि सेनाको दुर्व्यवहार
मोरङमा नग्न अवस्थामा महिला मृत भेटिइन्
मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका वडा नम्बर १ मा शनिबार बिहान एक महिला नग्न अवस्थामा मृत फेला परेकी छन्।
जंगली भ्याकुर खाँदा १० जना बिरामी
जंगलबाट ल्याएको भ्याकुर खाँदा तनहुँमा १० जना बिरामी परेका छन्।